BNB Vault ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ? | Binance Blog
BNB Vault ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
BNB Vault ဆိုတာဘာလဲ?
BNB Vault သည် BNB holder များအတွက် ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက အရင်းအနှီးအာမခံချက်ရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်သော ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများကို Binance ဂေဟစနစ်အတွင်း Binance ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဗဟိုနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးရန်ပုံငွေမှသူတို့၏ BNB ၏ ၀င်ငွေအလားအလာကိုတိုးမြှင့်စေရန်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် BNB holder များအားအတိုးနှုန်းမြှင့်ခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်သောအခွင့်အလမ်းတိုင်းမှအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ BNB Vault ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ကိုယ်ရဲ့ BNB ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေရန်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များတွင်အလွယ်တကူခွဲဝေချထားပေးပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့ BNB Vault ကိုသုံးသင့်သလဲ။- အလွယ်တကူ ရင်းနှီးငွေထည့်နိုင်ခြင်း- Binance ဂေဟစနစ်မှဝင်ငွေအမြောက်အများကို Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။- ကိုယ်လိုချင်တဲ့အခါတိုင်း ထုတ်လို့ရခြင်း
ကိုယ့်ဝင်ငွေရဲ့အမြတ်ကို ဘယ်လိုတွက်ချက်ရမလဲ?နေ့စဉ် BNB Vault ဝင်ငွေ = Launchpool မှ အကျိုးအမြတ်ရရှိလာသော token များ + BNB စာရင်းရှင်အပ်ငွေ + DeFi Staking နှင့် အခြားသော.
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ:- ကိုယ်ရဲ့ BNB Vault ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ၀င်ငွေများကို [BNB Vault] မှကြည့်နိုင်ပါတယ်။ [My Share]- ၀င်ငွေကိုနေ့စဉ်တွက်ချက်ပြီးသုံးစွဲသူ၏ Spot အကောင့်သို့ဖြန့်ဝေလိမ့်မယ်။- BNB Vault ၀င်ငွေသည်အစုရှယ်ယာဒုတိယနေ့တွင် ၀၀:၀၀ နာရီ (UTC) တွင်အတိုး စတင်၍ ဝင်ငွေကိုတတိယနေ့မှပေးလိမ့်မည်။- DeFi Staking သို့မဟုတ်အခြားထုတ်ကုန်များမှ ၀င်ငွေကို တကယ်ဝင်ငွေမှ နေဖြန့်ဝေပါလိမ့်မယ်။- BNB valut ထဲမှ BNB တွေဟာ စာရင်းရှင်ထဲမှာ ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် BNB ကိုင်ထားခြင်း ပမာဏတွက်ချက်ရာတွင် အကျုံးဝင်ပါတယ် ဒါတွေဟာ ဖြန့်ဝေခြင်း (Airdrop), စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း (lunchpad), VIP level တွက်ချက်ခြင်းတို့ပါ အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်
အမေးများသောမေးခွန်းများ၁. Subscribe လုပ်တာအများဆုံးကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။ အများဆုံးသတ်မှတ်ချက်ဆိုပီးမရှိပါဘူး။
၂. BNB vault က သေချာတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှုံမှုတစ်ခုလား။ ဟုတ်ပါတယ် သေချာပါတယ်။
၃. ကျွန်ုပ်ရဲ့၀င်ငွေကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲ?နေ့စဥ် BNB vault ၀င်ငွေ = Launch pool မှ Token အသစ် ရဲ့ reward +BNB Flexible saving + Defi staking နဲ့အခြားသောအရာများ။ဥပမာ အသုံးပြုသူက BNB 100 ကို BNB Vault အတွင်းstake ထားလိုက်ပါက အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူး၃မျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။100BNB အပေါ်မူတည်၍ Flexible saving မှ နေ့စဥ်အတိုးများကို Spot wallet အတွင်းရရှိမာပါ။- 100BNB အပေါ်အခြေခံ၍ Launchpool မှ Token အသစ်ရရှိမှာပါ။-BNB vault အတွင်း ထည့်ထားသော BNB ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ Defi staking မှ ၀င်ငွေတစ်ခုအပြင် BSC on-chain mining နှင့် အခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄. ကျွန်တော့၀င်ငွေကို ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ စစ်ကြည့်လို့ရမလဲ?Valult မှာ staking လုပ်တဲ့ နေ့ရဲ့နောက်၁ရက်ကနေစပီး User တွေရဲ့ spot wallet ထဲကို rewards တွေထည့်ပေးပါတယ်။ Spot wallet မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၅. BNB vault ရဲ့ ခန့်မှန်းအတိုးနှုန်းဘယ်လောက်ထိရှိပါသလဲ?ခန်းမှန်းနှစ်စဥ်အတိုးနှုန်းသည် 5% မှ 10% အကြားရှိပါတယ်။ Flexible saving , Defi staking , Launchpool နဲ့ နောက်ထွက်မယ့် Earn products တွေရဲ့ risk level နဲ့ အသားတင်အကျိုးအမြတ်တို့အပေါ်မူတည်ပီးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
၆. staked ထားတဲ့ BNBကိုဘယ်အချိန်မရွေး ပြန်ထုတ်လို့ရနိုင်ပါသလား?ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။ ထုတ်ချိန်ဆိုပီးကန့်သက်ထားတာမရှိပါဘူး။ အချိန်မရွေးပြန်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
၇။ BNB Vault တွင် Stakedထားသော BNB သည် BNB Balance တွက်ချက်မှုစနစ် တွင်ပါဝင်သလား?ဟုတ်ကဲ့ပါ၀င်ပါတယ်။ထို့အပြင် နေ့စဥ် BNB ကိုင်ထားခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူး များလည်းရပါတယ်။ Airdrop , Laumchpad , VIP စသဖြင့်ပေါ့။